Abavelisi beeNtloko ze-China Filter Shower kunye nababoneleli-i-Huanyu Sanitary Ware
Ikhaya > Iimveliso > Intloko yeshawari > Intloko yeshawa yesihluzi
Intloko yeshawa yesihluzi Abavelisi
I-Ningbo Huanyu Sanitary Ware Limited, umenzi ophezulu ochwephesha kunye nomthengisi ngaphandle e-China kwaye ube kumgca weplastiki ngaphezu kweminyaka engama-20 kunye neshishini lempahla yococeko iminyaka engaphezu kwe-10, Kwakhona. siye saqinisekisa ngenkqubo yokulawula umgangatho ye-ISO 9002S ekuqaleni kuka-1999. sivelisa zonke iimveliso zayo eTshayina. Iimveliso zethu iilayini zococeko ziquka oku kulandelayo: Intloko yeshawari, Intloko yesihluzi, iiseti zikaloliwe zesilayidi, izibambi zeshawa, ithumbu leshawa, iseti yeshawa, isibiyeli sodonga lweshawa, izincedisi zeshawa, iBidet yeshawa, ishawa & nezixhobo zokuhlambela ngokunjalo norhwebo nezinye izinto zococeko. iimveliso kwi Made in China Website.
Le I-Filter Shower Head ye-304 ephezulu yensimbi yokulondoloza amanzi ipaneli, ukwandisa uxinzelelo lwamanzi, ukungcola kokucoca, ukuhlambulula umgangatho wamanzi, kunye nokuzisa amava e-spa akhululekile.
Sinegunya elinamandla lokuphuhlisa uluhlu olubanzi lweemveliso ezintsha ngokobukhulu obahlukeneyo kunye neenkcukacha kubathengi bethu abadala ukhetho olwahlukileyo kwiimfuno ezahlukeneyo. Umgangatho ophezulu wentloko yeshawa uqinisekiswa bubuchwepheshe obuphambili, izixhobo zanamhlanje, kunye nolawulo lomgangatho kwinqanaba ngalinye lemveliso. Iintloko zethu zeFilter Shower zithandwa kakhulu ngenxa yenkonzo yethu esemgangathweni.
Ishawa yesihluzi sePhaneli ye-S.S
Esi sihluzi se-S.
Intloko yeshawari enemibala yentsimbi engatyiwayo yentloko
Le ipaneli yentsimbi enemibala ecocekileyo yokucoca ishawa yentloko engama-304 yentsimbi ekumgangatho ophezulu yokugcina amanzi, yonyusa uxinzelelo lwamanzi, icoca ukungcola, icoca umgangatho wamanzi, kwaye izise amava e-spa akhululekileyo. Iisayizi ezimbini ziyafumaneka
Thenga iimveliso kumzi-mveliso wethu obizwa ngokuba yi-Huanyu Sanitary Ware yenye yezona zinto ziphambili Intloko yeshawa yesihluzi zabavelisi kunye nababoneleli eTshayina. Umgangatho wethu oPhezulu Intloko yeshawa yesihluzi uthandwa ngabantu abafuna ukufumana izinto zorhwebo eziphantsi. Sinemveliso ezininzi kakhulu zokubonelela ngenkonzo yehoseyile. Unokuqiniseka ukuba uthenge ixabiso eliphantsi kumzi-mveliso wethu.